Toa mba mahay mipetraka sy milamina tsara ihany ny rehetra amin’ny ankapobeny fa ireo heverina ho fitaratra indray ity no toa manangan-tsampona. Tsy andron’ny fampielezan-kevitra intsony izao, saingy mandeha hatrany ny karazana fandranitana ataon’ny efa zatra mpihantsy ady. Lalaovina any anaty serasera sy haino aman-jery ny voka-pifidianana amina biraom-pifidianana vitsivitsy hoentina hanaratsiana kandida, toy ny hoe: resy i Marc Ravalomanana teny ambany tanàna ary naloam-bahoaka e ! Sarotra sy mahamenatra ny hamerina ireo voambolana toa ambany fisainana sy fanavakavaham-bolon-koditra hoentina manasoketa an’i Marc Ravalomanana ho manavakavaka ny olona eto afovoan-tany sy any amin’ny sisiny e ! Iza no kandida akaiky indrindra ny vahoaka sy nifanerasera indrindra tamin’ny Malagasy nanerana ny Nosy tao anatin’ny 4 taona ? Iza no nandeha nigalabona nihinana ny harena nangalarina teto avy eo tonga nanambitamby ny Malagasy indray ? Voizina hatramin’ny adim-poko amin’izao hoentina mandoto sy manaratsy azy. Matahotra mafy iny olona iny ho lasa filoham-pirenena tsy ho ela taorian’ny namotehana sy nanenjehana azy ho naloam-bahoaka tamin’ny 2009 ve ka manao adim-borontsiloza sy tsy mifidy vava havoaka ? Efa tena lany henatra ! Io porofoin’ny Malagasy io fa lainga sy fanosoram-potaka ny natao 9 taona lasa izay, ka toran-kovitra sy mihorohoro hatrany ny sasany, izay toa efa manao tsipaky ny miala aina sy mandrovi-tsihy e !